Zvokupoda-poda Nemafuta Munguva Dzinotaurwa muBhaibheri
SARUDZA MUTAURO Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Bulgarian Cebuano ChiSutu (Lesotho) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chirungu Croatian Czech Danish Dutch Estonian Ewe Finnish French Georgian German Greek Hiligaynon Hungarian Iloko Indonesian Italian Japanese Kinyarwanda Korean Lithuanian Malagasy Myanmar Norwegian Polish Portuguese Romanian Russian Sepedi Serbian Setswana Shona Sinhala Slovak Slovenian Spanish Swedish Tagalog Tsonga Turkish Twi Ukrainian Vietnamese Xhosa Zulu
Basa rokuzvishongedza raiitwa nevamwe vakadzi vanotaurwa muBhaibheri raisanganisira zvizorwa zvekupenda maziso, zvokumeso nezveganda
Mukadzi anotanga kuzora mafuta anonhuhwirira pashure pokunge apedza kugeza. Anobva avhura bhokisi rakashongedzwa zvakanaka rine tumabhodhoro netumidziyo zvakagadzirwa negirazi, nyanga dzenzou, matemhe etupukanana kana kuti nematombo. Mumidziyo iyoyo mune mafuta akasiyana-siyana nemapefiyumu akasanganiswa nebharisamu, sinamoni, zvinonhuwirira zvichena, mura nezvimwewo.
Anobudisawo zvipunu, tumadhishi netundiro zvakavezwa zvakanaka. Anotushandisa pakusanganisa zvaari kuda kuzora musi iwoyo. Anozvitarisa muchionioni chebhuronzi oenderera mberi nokupoda-poda.
ZVINOITA sokuti kubvira makare-kare vakadzi vanofarira chaizvo zvokuzvishongedza. Mifananidzo yakadhirowewa pamakuva nemadziro zvekare inoratidza kuti vanhu vakawanda vekare vokuMesopotamiya neIjipiti vaishandisa zvizorwa. Vanhu vaiyemura chaizvo mifananidzo yaigadzirwa yevakadzi vokuIjipiti vakapenda maziso avo zvakapfurikidza.
Zvakadini nevaIsraeri? Vakadzi vechiIsraeri vekare vaishandisawo here zvizorwa? Kana vaizvishandisa, vaizora chii? Hapana hapo mifananidzo yepamakuva nemadziro zvomuIsraeri yekare zvinogona kutibatsira kuziva izvozvo. Asi dzimwe nyaya dziri muBhaibheri nezvinhu zvakawanda zvakawanikwa nevanochera matongo kunzvimbo dzinotaurwa muBhaibheri, zvinotibatsira kuziva zvishoma nezvekushandiswa kwezvizorwa munguva dzinotaurwa muBhaibheri.
Midziyo yematombo yezvizorwa, Israel
Pane zvinhu zvakawanda zvakafukunurwa kunyika yeIsrael zvinoratidza kuti vanhu vekare vaishandisa zvizorwa nemapefiyumu. Zvimwe zvakawanikwa zvinosanganisira ndiro dzematombo dzaishandiswa kukuya nokusanganisira zvizorwa, tumabhodhoro twepefiyumu, midziyo yemafuta earabhasta nezvionioni zvebhuronzi. Chimwe chipunu chakagadzirwa nenyanga yenzou chaiva chakavezwa mufananidzo wemashizha emichindwe kune rimwe divi romubato wacho uye musoro wemukadzi akakombwa nenjiva kune rimwe divi.
Zvinoita sokuti vaya vainge vakapfuma ndivo vainyanya kushandisa matemhe etupukanana semidziyo yokuisira zvizorwa. Kunzvimbo dzaimbova neIjipiti neKenani kwakawanikwawo zvipunu zviduku zvakagadzirwa nenyanga dzenzou nematanda. Zvimwe zvacho zvainge zvakavezwa kuita vasikana vari kushambira uye zvimwe zvainge zvakashongedzwa netwakawanda-wanda. Zvose izvi zvinopa uchapupu hwokuti vakadzi vepanguva iyoyo vaigara vachishandisa zvizorwa.
Bhaibheri rinoti mumwe wevanasikana vaJobho ainzi “Kereni-hapuki.” MuchiHebheru, zita iri rinogona kureva kuti mudziyo kana kuti bhokisi rinoshandiswa kuchengetera zvinhu zvokupenda maziso. (Jobho 42:14) Zvichida zita racho raireva kuti akanga akanaka, asi rinenge rinoratidzawo kuti panguva iyoyo vanhu vaiita zvokupoda-poda.
Bhaibheri rinoratidza kuti zvokupenda maziso zvainyanyoitwa nevanhu vakanga vakaipa vakaita saMambokadzi Jezebheri nevanhu vomuJerusarema vakanga vasina kutendeka, avo vakafananidzwa nehure nevaprofita Jeremiya naEzekieri. (2 Madzimambo 9:30; Jeremiya 4:30; Ezekieri 23:40) Tichifunga kuwanda kwakaita zvinhu zvakafukunurwa zvinoti midziyo yemagirazi nematombo netumwe tumidziyo twaishandiswa pakupenda maziso, zviri pachena kuti vakadzi vakawanda verudzi rwaIsraeri rwakanga rwapanduka, kunyanya vaya vaiva mumhuri dzoumambo nevapfumi, vakanga vava kuitawo tsika yokupenda maziso zvakapfurikidza nekushandisa zvimwewo zvokupoda-poda.
Kushandisa Mafuta Anonhuhwirira Pakunamata Nezvimwewo
Mapefiyumu anogadzirwa pachishandiswa mafuta emiorivhi akabvira kare kare achishandiswa muIsraeri yekare. Bhuku reBhaibheri raEksodho rinotaura nezvemagadzirirwo aiitwa mafuta matsvene anonhuwirira aishandiswa nevapristi pabasa ravo patemberi. Mafuta acho aiva musanganiswa wesinamoni, mura nezvimwe zvinomera zvinonhuwirira. (Eksodho 30:22-25) KuJerusalem, vanochera matongo vakawana pavanofunga kuti ndipo paigadzirirwa mafuta anonhuwirira nerusenzi zvaishandiswa patemberi panguva yakararama vaKristu vepakutanga. Bhaibheri rine pakawanda parinotaura nezvemafuta anonhuwirira aishandiswa pakunamata nezvimwewo zvinhu zvezuva nezuva.—2 Makoronike 16:14; Ruka 7:37-46; 23:56.
Mudziyo wevhu wepefiyumu, Israel
Mvura yaiva shoma munzvimbo yacho saka mafuta anonhuwirira aishandiswawo pane zveutsanana. Mafuta akanga asingangoshandiswi pakudzivirira ganda pazuva asi pakuitawo kuti munhu ataridzike zvakanaka. (Rute 3:3; 2 Samueri 12:20) Musikana wechiJudha ainzi Esteri akapedza mwedzi mitanhatu achizorwa mafuta emura uye mimwe mwedzi mitanhatu achizorwa mafuta ebharisamu asati aendeswa kunoonekwa naMambo Ahashivheroshi.—Esteri 2:12.
Ukoshi hwemapefiyumu nemafuta anonhuwirira hwakanga hwakangofanana nehwesirivha nendarama. Mambokadzi weShebha paakaita rwendo rurefu rwokunoona Mambo Soromoni, zvimwe zvezvipo zvinokosha zvaakamupa zvaisanganisira goridhe, matombo anokosha nemafuta ebharisamu. (1 Madzimambo 10:2, 10) Mambo Hezekiya paakaratidza nhumwa dzeBhabhironi upfumi hwake, “mafuta ebharisamu nemafuta akanaka” akanga akaiswa panoonekwa nevanhu pamwe nesirivha, ndarama nezvombo zvake zvose.—Isaya 39:1, 2.
Maruva, michero, mashizha, guruu remiti nemakwati zvaingobudisa pefiyumu kana kuti mafuta mashomanene. Bhaibheri rinotaura nezvezvinomera zvinonhuhwirira nezvimwewo zvinogadzirwa zvakadai searosi, bharisamu, dheriyumu, karamusi, kasiya, sinamoni, zvinonhuhwirira zvichena, mura, safuroni uye nadhi. Zvimwe zvacho zvaimera munyika yacho muMupata waJodhani. Zvimwe zvaibva kunyika dzavaitengeserana nadzo dzakadai seIndia, South Arabia nedzimwewo.
Mafuta ebharisamu anotaurwa munhoroondo dzeBhaibheri dzinorondedzera nezvaMambokadzi Esteri, Mambokadzi weShebha uye Mambo Hezekiya. Muna 1988 pakawanikwa mudziyo muduku waiva nemafuta mune rimwe bako pedyo neQumran, kumhenderekedzo iri kumavirira kweGungwa Rakafa. Vanhu vakataura zvakasiyana-siyana nezvemudziyo wacho. Vatsvakurudzi havanyatsozivi kuti aya angava ariwo mafuta ebharisamu yaiva yakakurumbira here. Nanhasi vanhu vachiri kuedza kudyara miti yebharisamu yakanga yakakurumbira.
Mudziyo wenyanga yenzou wezvizorwa, Israel
Uchapupu huripo hunenge hunoratidza kuti miti yemafuta ebharisamu inotaurwa muBhaibheri yairimwa kuEni-gedhi. Vanoita zvokuchera matongo vakafukunura vakawana hovhoni, nemimwe midziyo yesimbi neyemabhonzo zvairatidza kuti ndezvemakore anenge 2 600 akapfuura, uye zvakafanana nezvaishandiswa mune dzimwe nzvimbo pakugadzira pefiyumu. Nyanzvi dzakawanda dzinoti muti wokutanga webharisamu wakabva kuArabia kana kuti muAfrica. Pefiyumu yacho yaiwanikwa mumvura inobuda pamuti wacho. Mafuta ebharisamu aikosheswa chaizvo zvokuti marimirwo emuti wacho nemagadzirirwo aiitwa mafuta acho zvaisangoudzwa munhu wose wose.
Vanhu vaishandisawo bharisamu kuti vawane zvavaida mune zvematongerwo enyika. Somuenzaniso, munyori wenhoroondo dzekare ainzi Josephus akataura kuti Mark Antony akapa Mambokadzi Cleopatra wokuIjipiti chipo chemunda wemiti iyi yaikosha nokuti aimuda. Munyori wenhoroondo dzekare wokuRoma ainzi Pliny akataura kuti pairwiwa hondo yevaJudha makore anenge 2 000 akapfuura, varwi vechiJudha vakaedza kuparadza miti yose yebharisamu kuti isatorwa nevaRoma vakanga vavakunda.
Bhaibheri pamwe chete nezvakawanikwa nevanochera matongo zvinotibatsira kuva nekaruzivo kekuti vanhu vanotaurwa muBhaibheri vaishandisa zvizorwa. Bhaibheri haritauri haro kuti kupoda-poda nokuzvishongedza kwakaipa, asi rinosimbisa kuti zvinofanira kuitwa nemwero nepfungwa dzakanaka. (1 Timoti 2:9) Muapostora Petro akataura kuti “mudzimu wakanyarara uye munyoro” ndiwo “unokosha kwazvo pamberi paMwari.” Iri izano rakanaka chaizvo kuvakadzi vechiKristu vakuru nevaduku tichifunga nezvekuchinja kuri kuramba kuchiita fashoni nezvitaera.—1 Petro 3:3, 4.